अमूर्त सहर : एक वृत्तान्त- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
अमूर्त सहर : एक वृत्तान्त
पुस २५, २०७७ नारायण ढकाल
धेरै रहस्यमय र कठिन रहेछ
जब म सहरको मध्यभागबाट गुज्रन्छु
तब उसको अनुहार देखेर
र, मस्तिष्कले काम गर्दैन
जब म देख्छु– शाही उद्यानको अगाडि
शरीर बेच्न ग्राहक पर्खिरहेका
आत्मा बेच्न हात पसारिरहेका
ज्यालामा ठगिएर टोलाइरहेका
त्यसपछि झन् कठिन बन्छ सहरको अर्थ
त्यसपछि झन् गोलमाल हुन्छ उसको परिभाषा
फुटपाथमा उत्तानो बसेका
खासा बजारको बाटो भएर आएका
आफ्नै भाग्य नबुझी
अरुको भाग्य बताउन पल्टिएको
हस्तरेखाको थोत्रो पुस्तक
जीवनको बाटो देखाउन असमर्थ
घर फर्किने यात्रु कुरिरहेका
थोत्रा बस र टेम्पो
कसैले पनि ठीकसँग बताउन सक्दैन
सहर हुनुको अर्थ र हिसाबकिताब
खर्पनमा साग बेच्न आउने किसान
गाग्री बोकेर दूध बेच्न आउने युवती
सपना खोज्न आएको दुब्लो कवि
सबै–सबै रनभुल्ल छन्
धौबजी, चतामरी, काल्चाको पिरो आलु
वास, ग्वारमरी, हाकु छोय्ला, हाकु पटासी
सहर हुनुको अर्थ र उसको जन्मपत्रिका
मूलसडकको छेउबाट हिँड्दा
देख्छु—नयाँ सम्राट्को सवारी
कालो ऐनाजडित भव्य गाडीभित्र
च्यातिएको कुरुप संविधानजस्तै
अनुहार फेरिएको छ उसको
ऊ कुनै समय थियो मेरो लंगौटिया यार
सायद उसलाई थाहा थियो हरितन्नम मान्छेको भोक
सायद उसलाई ज्ञान थियो
फुटपाथमा बसेको जुत्ता मर्मत गर्ने सृजनशील सार्कीको कथा
सायद उसले बुझेको थियो
सस्तो संस्करणको किताब खोजिरहेको
गरिब विद्यार्थीको तनाव
सुकेनासग्रस्त बालकलाई पिठ्युँमा बोकेर
अस्पताल होइन झाँक्रीकोमा गइरहेकी जवान आमाको सकस
गोनोरियाग्रस्त नगरवधूहरुको दुःख
सायद उसले बुझेको थियो ।
पहिले ऊ मेरो स्वप्निल आदर्श थियो
पहिले ऊ मेरो झरझराउँदो आशा थियो
तर, यो उसको नाटक मात्र रहेछ
तर, उसको अन्तस्करण अर्कै रहेछ
ऊ सम्राट्को सिंहासनमा पुग्यो
जब ऊ सिंहासनमा चढ्यो
त्यसपछि यता ऊ आफ्ना पुराना यारहरु कसैलाई चिन्दैन
उसले आफ्नो जीवनी बिर्सेको छ
उसले स्वतन्त्रता र प्रेमको गीत बिर्सेको छ
उसले हिरासत र गोलघरको यातना बिर्सेको छ
उसले भोकको कहालीलाग्दो आफ्नै कथा बिर्सेको छ ।
नयाँ सम्राट् अहिले आफ्ना आफन्त कसैलाई चिन्दैन
एक समय साहूको घरमा भााडा माझेर गुजारा गर्थी उसकी आमा
बाबु जमिनदारको घरमा हली बसेको थियो
अब ऊ आफ्नी आमालाई चिन्दैन
अब ऊ आफ्नै बाबुलाई पनि चिन्दैन
अब ऊ आफैं नबुझिने सहर भएको छ ।
ओ शब्दकोशका सर्जक !
धेरै रहस्यमय र कठिन पो रहेछ
सहरको शब्दार्थ पहिल्याउन ।
प्रकाशित : पुस २५, २०७७ ११:१२
दास मुक्तिको ओडिसी
सत्यदेवको अगुवाइमा मोक्षनगरका निम्ति जमिन खोज्न हिँडेको यात्रा पढ्दा कतै लेखकले कवि होमरले झैं नयाँ ओडिसी सिर्जना गरेको हो कि भन्ने भान पर्छ । यसर्थ नेपाली उपन्यासको नक्सामा मोक्षभूमिको ठाउँ स्पष्ट र जब्बर छ भन्नेमा मेरो दृढ मत छ ।
मंसिर २०, २०७७ नारायण ढकाल
नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन विषयमा अलग्गै किसिमले अभिमत राख्दै आएका केशव दाहाल अब आख्यानकारको नयाँ अवतारमा प्रकट भएका छन् । उनको उपन्यास ‘मोक्षभूमि’ किताब पब्लिसर्सले असोज २०७७ मा प्रकाशित गरेको छ । यो किताबमा देखिएको उनको छवि राजनीतिक टिप्पणीकारको भन्दा धेरै भिन्न छ । राजनीतिक चिन्तनमा उनी समसामयिक समस्यामा एकाग्र छन् भने मोक्षभूमिमा उनले सुदूर अतीतको कथा बुनेका छन् ।
कोरोना भाइरसले आतङ्कित पारेको यो समयको एक दिन, लगभग एक महिना जति अघि, लेखक केशव दाहालसँग मेरो छोटो भेट भएको थियो । मैले सोधेको थिएँ, ‘के ’मोक्षभूमि’ ऐतिहासिक उपन्यास हो ?’ उनले भनेका थिए, ‘होइन, यो विशुद्ध कथा हो ।’ जब मैले उपन्यास पढ्न थालेँ तब मलाई एकपछि अर्को गरी तथ्य र आख्यानका दुइटै पहाडले किच्न थाले । कतै तथ्यको नजिकनजिकजस्तो र अनि आख्यान त आफैंमा भइहाल्यो ।
उपन्यासको सुरुको वाक्य यसप्रकार छ– ‘संवत् १२९०, भदौ महिनाको तेस्रो शुक्रबार ।’ यस्तै मिति जनाउने अर्को वाक्य पनि छ अध्याय ३ को सुरुमा– ‘संवत् १२८०, शरद ऋतुको पहिलो दिन ।’ यी दिन शाके, नेपाल, इस्वी वा विक्रम कुन संवत्का हुन् स्पष्ट नभए पनि यिनले पाठकका निम्ति सुदूर इतिहासको समय बुझाउने विम्ब र अवधारणा निर्माण गर्छन् । यस्तै इतिहासमा उल्लिखित सिंजा, त्यहाँका राजा क्राचल्ल र उपन्यासमा वर्णित क्राचल्लदेवको विशेषतामा मेल हुने केही सन्दर्भ छन् । क्राचल्ल बौद्धमार्गी र धार्मिक सहिष्णुताका पक्षधर हुन् । उनले आफ्नो शासनकालमा कुमाउँ आक्रमण गरेर त्यहाँ आधिपत्य स्थापना गरेका थिए । उनले विक्रम संवत् १२६४ देखि १२८० सम्म राजपाठ चलाएको इतिहास छ । यस्तै उपन्यासको प्रधान पात्र क्राचल्लदेव पनि बौद्धमार्गी भएको र उनले आफ्नी कान्छी रानी अप्सराका निम्ति प्रेम उपहार दिन कुमाउँमाथि आक्रमण गरेर कब्जामा लिएको कथा छ । उपन्यासमा इतिहासको झल्को दिने केही छाया पात्रहरू पनि छन्, जस्तै ः मधुमालती, छ्वानदेन र भय मल्ल । तिनले क्रमशः हाम्रो इतिहास र वंशावलीमा वर्णित भृकुटी, स्रङ्चन गम्पो र अभय मल्लको झझल्को दिन्छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि लेखक आफैंले भनेझैं यो ऐतिहासिक उपन्यास होइन । यो सामाजिक किताब हो, तथापि यसको स्थापत्य इतिहासबोधको जगमा चाहिँ बनेको छैन । त्यो विशेष समयमा (संवत् जेसुकै होस्) क्राचल्लदेवको सिंजा दरबारले कसरी दस हजार दासहरूलाई मुक्त गर्‍यो र मुक्ति पाएका दासहरूमध्ये नौ हजारका अगुवा सत्यदेवको नेतृत्वमा कसरी मोक्षनगरको निर्माण भयो भन्ने जिज्ञासाको उत्तर नै यो किताबको मेरुदण्ड हो । मोक्षनगरको निर्माणपछि गरिमामय मानवीय सभ्यता निर्माणहेतु उदात्त मूल्यहरूको स्थापनार्थ लेखकले राखेका आग्रह नै उपन्यासका अन्तरवस्तु हुन् । पुस्तकको गाताको पछाडि पनि स्पष्ट लेखिएको छ– ‘कष्टको पिँजडाबाहिर आउन मान्छेहरूको तीव्र छटपटी र तिनै कष्टहरूको जन्जिरबाट फुत्किएका दासहरूको सयौं वर्षअगाडिको कथा हो यो ।’
लेखक दाहालले इतिहासबाट बहिर्गमन गर्ने र कथा लेख्ने विषयमा उपन्यासको पहिलो र दोस्रो अध्यायमा रोचक घटना प्रस्तुत गरेका छन् । मोक्षनगर बनेपछि नगरसभाले स्वरदेव नाम गरेका लेखकलाई दासहरूको इतिहास लेख्ने जिम्मा दियो । तर, जब स्वरदेव लेख्न बस्यो उसले इतिहास होइन कथा लेख्ने निर्णय गर्‍यो । स्वरदेवमार्फत लेखकले पुस्तकको पृष्ठ आठमा भनेका छन्, ‘यो इतिहास होइन, इतिहास र कथाबीच सानो सिमाना हुन्छ ।’
एक साताभित्र पढिसिध्याउने लक्ष्य राखेर पढ्न बसको थिएँ तर किताब समातेपछि प्रस्तावित लक्ष्य भत्कियो । पढ्न थालेपछि अरू काम गर्नै मन लागेन । फलस्वरूप ः दुई दिनका लामा दुई बसाइमा पढिभ्याइयो । किताब पढेपछिको मेरा केही संक्षिप्त निष्कर्ष छन्– पहिलो, लेख्नुअघि लेखकले सामग्रीहरूको संग्रहमा धेरै मिहिनेत गरेको देखिन्छ । मूलतः एउटा लेखकले उपन्यास लेखनलाई लहडको सतही विषय नबनाएर एउटा प्राज्ञिक चेष्टाको विषय बनाउन खोजेको स्पष्ट बुझिन्छ । दोस्रो, उपन्यासको मूल स्वभाव पौराणिक वा दार्शनिक नभए पनि तत्ससम्बन्धी सामग्रीको प्रचुरता पाइन्छ । यसैले उपन्यास पढ्दा कतै पुराण, कतै स्वतन्त्रताको जयगान र कतै दर्शनको उत्तेजक स्पर्शबोध हुन्छ । अभयनाथ, ब्रह्मानन्द, राजगुरुजस्ता पात्रहरूको अद्वैत, शून्य र मोक्ष विषयक बहस निकै रोचक छ । तेस्रो, सत्यदेवको अगुवाइमा मोक्षनगरका निम्ति जमिन खोज्न हिँडेको यात्रा पढ्दा कतै लेखकले कवि होमरले झैं नयाँ ओडिसी सृजना गरेको हो कि भन्ने भान पर्छ । यसर्थ नेपाली उपन्यासको नक्सामा मोक्षभूमिको ठाउँ स्पष्ट र जब्बर छ भन्नेमा मेरो दृढ मत रहेको छ ।
लेखकले भनेझैं इतिहासमा कथा नरहे पनि कथामा इतिहास रहन्छ । हिन्दीका समीक्षक मैनेजर पाण्डेय पनि भन्छन्, ‘आख्यानमा चित्रण गरिएको मानिस ऐतिहासिक व्यक्ति हुन्छ । ऊ इतिहासबाट बन्छ र इतिहासलाई बनाउँछ ।’ ‘पहल–७७’ नामक पत्रिकामा प्रकाशित ‘उपन्यास र लोकतन्त्र’ शीर्षकको लेखमा उनले प्राज्ञ मिसेल जेरेफाको एउटा भनाइ उद्धृत गरेका छन् । मिसेल भन्छन्, ‘उपन्यासको पाठमा चित्रित मानिस एक्लै बाँच्न सक्दैन । उसको एउटा अतीत, एउटा वर्तमान र एउटा भविष्य हुन्छ । इतिहासले प्रमाणित गर्छ– इतिहास नभई समाज हुँदैन र समाजबिना पनि इतिहास हुँदैन । उपन्यास यस्तो कला हो जसले ऐतिहासिक र सामाजिक रूपले परिभाषित मानिसलाई पुनर्प्रस्तुति गर्छ ।’
यही आलोकमा मोक्षभूमि पढ्दा उपन्यासकार दाहालले अपनाएका केही विषयले भने मेरो मथिङ्गल हल्लायो । विशेषगरी विषयवस्तु, संरचना, पात्रहरूको विकास, कथाको मार्गचित्र र परिवेशको विश्वसनीयताको सवालमा म धेरै दिन अलमलिएँ । जब लेखक भन्छन, ‘कथा इतिहास पनि हो’ भने ‘मोक्षभूमि’ को कथामा हाम्रो कुन इतिहास आयो ? कुन समयका पात्रहरू आए ? कुन समयको सामाजिक द्वन्द्वको चित्रण गरियो ? यी प्रश्न अहिले पनि मेरो टाउकोबाट बाहिरिन सकेका छैनन् ।
दास व्यवस्था मानव इतिहासको एउटा दुःखान्त कलंक हो । यो कलंक विश्वका सबै समाजमा विभिन्न रूपमा घटेको थियो । तर, चीन र दक्षिण एसियामा प्राचीन रोम वा ग्रीसको जस्तो दास व्यवस्था थिएन भनेर धेरै इतिहासकारहरूको अभिमत छ । यस्तो भन्नेमा जवाहरलाल नेहरू एक हुन् । उनको इतिहासको किताब ‘विश्व इतिहासको झलक’ मा यो विषय छ । त्यस्तै रोम वा ग्रीसको दास व्यवस्थाको सापेक्षतामा आर्यावर्त भनिएको भारतीय उपमहाद्वीपले दासहरूमाथि धेरै उदार र मानवीय व्यवहार गरेको देखेर युनानी दूत मेगस्थनिजले छक्क पर्दै भनेका थिए, ‘भारतीय उपमहाद्वीपमा एक जना पनि दास छैनन् ।’ मेगस्थनिज इपू ३०२ मा चन्द्रगुप्त मौर्यको समयमा पाटलीपुत्र आएका थिए । उनले लेखेको यात्रा वर्णनको पुस्तक ‘इन्डिका’ मा यो भनाइ छ भनी युनानी इतिहासकारहरू भन्छन् ।
दास शब्दको प्रयोग वैदिक साहित्यमा आर्यहरूका विरोधी मूल निवासीहरूका लागि भएको छ । यसबाट बुझिन्छ, आर्यसित युद्धमा हारेका बन्दीलाई पछि सेवा–काममा लगाइएको हो । दासलाई दानमा लिने पनि उल्लेख पाइन्छ । पछि गएर केही आर्यहरूको अवस्था पनि दासको जस्तै भयो । बौद्ध साहित्यमा पनि दासहरूको उल्लेख पाइन्छ । त्यहाँ तीन किसिमका दासको वर्णन छ । स्वामीको घरमा जन्मिएको, धनले किनिएका र युद्धमा जितिएका । अझ मनुले सात किसिमका र नारद स्मृतिले पन्ध्र प्रकारका दास रहेको वर्णन गरेका छन् (भारतीय संस्कृति कोश ः लीलाधर शर्मा पर्वतीय) ।
यस्तै अठारौं शताब्दीमा युरोपका केही देश र अमेरिकाले अपनाएको जस्तो क्रूर र मानवद्वेषी दासप्रथा दक्षिण एसिया र नेपालमा थिएन । बरु यहाँ त्यत्तिकै स्तरको अमानवीय र प्रतिगामी वर्णव्यवस्था थियो, जसका कुरूप झाँकीहरू अहिलेसम्म पनि हाम्रो समाजमा विद्यमान छन् र तिनले हामीलाई हरदिन कोतरिरहेका छन् ।
नेपालमा दासप्रथाको जन्म र अवसानबारे त्यति विस्तृत खोज र अनुसन्धान भएको छैन । दासमोक्षका पछिल्ला केही घटना इतिहासमा लिपिबद्ध छन् । एउटा विसं १९८१ मार्ग १४ गते श्री ३ चन्द्रशमशेरले गरेको दासप्रथा उन्मूलन र अर्को विसं २०५७ र २०७० मा क्रमशः भएका कमैया र कमलरी प्रथाको अन्त्यको घोषणा । यीबाहेक काठमाडौं उपत्यकामा शंखधर साःख्वाले बालुवालाई सुन बनाएर जनताको ऋण तिरेको आहान इतिहासजत्तिकै बलवान छ । यो वंशावलीमा आधारित किंवदन्तीमा शंखधरले दासको ऋण तिरे/नतिरेको विषय भने स्पष्ट छैन । चन्द्रशमशेरले चाहिँ ६० हजार दासलाई मुक्त गरेका थिए । यसबापत ३६ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यो पैसा पशुपतिनाथको गुठीबाट झिकिएको थियो । मुक्तहरूलाई भिक्षाखोरी अर्थात् हालको अमलेखगन्जमा पुनःस्थापना गरियो ।
क्राचल्लदेवले दासहरूलाई मुक्त त गरे तर उनीहरूको पुनःस्थापनाचाहिँ किन गरेनन् ? खट्किने प्रश्न छ । विपुल उदारवादी सोचका धनी र प्रेमका उद्भट उपासक क्राचल्लदेव के राणा चन्द्रशमशेर जत्ति पनि अग्रगामी थिएनन् ? कान्छी रानीलाई उपहार दिन कुमाउँ आक्रमण गरेर जित हासिल गरेको लगत्तै युद्धप्रति प्रदर्शित उनको विरक्तिले दासमोचनतिर उनको अग्रसरता बढाएको छ । युद्ध र विजयमा गौरवान्वित रहँदै बाँचेको एउटा राजालाई मन पर्ने कान्छी रानीको पहिलो प्रतिक्रियाले एकाएक युद्धविरोधी खेमामा पुर्‍याउनु स्वाभाविक नभएर थोपरिएको जस्तो लाग्छ । यस्तै सिंजा दरबारको शक्तिसित जोडिएको राजा र युवराजमाझको कलह दरबारको कलहजस्तो नभएर सामान्य मानिसको घरझगडाजस्तो देखिन्छ । यी कार्यव्यापारमा क्राचल्लदेव र उनका विपक्षीहरूका शिथिल भूमिकाले उनलाई प्रखर र विश्वसनीय पात्र बन्न दिएको छैन । बरु राजाको तुलनामा दासविमोचनको विरोधमा रहेका राजगुरु आर्यदेव जीवन्त लाग्छन् । उनको चरित्रचित्रणमा भने स्वाभाविक गति पाइन्छ ।
उपन्यासका अन्य महत्त्वपूर्ण पात्रहरू जस्तै राधा, ताम्रा, सत्यदेव, कृष्णदेव, भार्गदेव आदिहरू पनि उनीहरूको आफ्नो कार्यव्यापारले भन्दा अधिक वर्णनको चापमा थिचिएर राम्ररी हिँड्नसमेत नसकेका जस्ता लाग्छन् । उदाहरणका लागि के–के गुण भएर सत्यदेव मुक्त दासहरूको नायक भए उनको व्यवहारले बताउँदैन । यस्तै राधा–कृष्णदेव र दमयन्ती–भार्गदेवको प्रेमलाई किन गहिराइमा पुर्‍याउन लेखकले कञ्जुस्याइँ गरे, मैले पहिल्याउन नसकेको अर्को पहेली हो । भार्गदेव र कृष्णदेवको कूटनीतिक यात्राको अभिधार्थ र प्रयोजन पनि केका लागि ? त्यसको प्रतिफल खोइ ? यसप्रकारका अरू प्रश्न पनि छन् । अब यसपछि मेरो खुलदली अरू बढ्छ र सबाल बन्छ– के कलासाधकले पुरानो समयको कथा लेखे पनि कलात्मक प्रतीक, ध्वनि र विम्बद्वारा अहिलेको नेपाली समाजको संकट र छटपटीबाट पुनर्गठनतिर जानुपर्ने यात्रा र गन्तव्यलाई संकेत गर्नु पर्दैन ? यस्ता प्रश्नले प्राज्ञिक र सौन्दर्यशास्त्रीय बहसको माग गर्छन् ।
उपन्यास निकै जोखिम र चुनौती भएको साहित्यिक विधा हो । साहित्यिक अनुशासनका अन्य विभागको तुलनामा उपन्यासभित्र कला र सामाजिक विज्ञानका धेरै सङ्काय समेट्न सकिने सम्भावना रहन्छ । यही कारणले पनि उपन्यासलाई मानव सभ्यताको पछिल्लो युगको गद्य महाकाव्य भनिएको हो । यो विधामा कथा भन्नुभन्दा कथा देखाउनु ठीक हुन्छ भन्ने स्थापित मान्यता छ । यस विषयमा अर्को मान्यता पनि छ– जीवनको गूढ र गम्भीरतम दर्शनलाई समेत सजिलो तरिकाले भन्न सक्नु । तर, लेखकको बौद्धिक पहलमानीको उचाइ निकै अग्लो भएर पनि यो मान्यताको प्रयोग ‘मोक्षभूमि’ मा धेरै कम मात्रामा भएको छ । सायद यो विशेषता उपन्यासकार दाहालको मात्र एकल समस्या नभएर हाम्रो समग्र औपन्यासिक इतिहासको पनि सीमा हो कि ?
प्रकाशित : मंसिर २०, २०७७ ११:१३
सिरिजङ्गालाई किन चाहियो फुर्का ?
यी जोधाहा कविता
५० वर्षअघिको भेट
थाना लाइनको त्यो कुमार केटो
‘सृष्टिकै कान्छो सन्तान’ का नाममा